Ukumaketha, Inethiwekhi marketing
MLM noma inethiwekhi marketing yebhizinisi uvele ezweni lethu iminyaka engaphezu kuka-nanhlanu edlule. Amaphayona angabhekwa brand yezimonyo Oriflame futhi Avon, esekhona nanamuhla emakethe.
Namuhla, inani izinkampani inethiwekhi ikhuphuke kakhulu, futhi ezinkulu kunazo zonke kubo ingatholakala kwi-website esemthethweni we-Association of yokuthengisa eqondile.
Uhlu olulandelayo akuyona simo, kodwa kwenza kube nokwenzeka ukuba ugweme imikhonyovu, ngoba ngezinye izikhathi ezishaya unkulunkulukazi u-inethiwekhi izikhumba abavamile mbhoshongo isikimu. Akungabazeki omningi is Wicholding, ukubuyekezwa okuyizinto ngempela eziphikisa.
Ngo ukubuyekeza kwethu, uzothola ulwazi mayelana nebhizinisi MLM, amakhono adingekayo, kanye imibono yabantu abaye basebenza e Wicholding.
Imininingwane Basic imisebenzi yenhlangano uvezwa www.wicholding.com indawo. Izibuyekezo "Abangane" wangaphambili esashiwo usomabhizinisi odumile Arkady Sharov njengenhloko yomkhaya inkampani. Nokho, ngokusekelwe idatha esemthethweni, inkampani international Umhlaba Intercontinental kubhaliswe ku-British Virgin Islands (Caribbean). Mhlawumbe, abaningi baye bezwa ngalokhu ngobukhulu indawo engasogwini, okuyinto asidingi ukubika noma ukukhokha izintela.
Ngakho, inkampani international, kodwa umsebenzi oyinhloko ngandlela-thile olwenziwa e-Russia kanye CIS amazwe. Imininingwane ephikisanayo inkampani Wicholding ukubuyekezwa. Amanga wonke iziqubulo yayo noma cha - esinalo ukuthola it out. Abaningi baye bazwakalisa agumenti aqinileko umsebenzi ehhovisi. Kodwa uzoba sikunikeza Wicholding elinye ithuba futhi uthathe sihlolisise imikhiqizo ithengiswe.
Ngokuvamile, izinkampani inethiwekhi ukukhetha isiqondiso eyodwa eyinhloko. Tupperware ethengisa tableware eyenziwe i-polymer akhethekile ensimbi, lesi Amway umusho odumile imikhiqizo ekhaya, noMariya Kay, Oriflame futhi Avon ezikhethekile izimonyo, amakha nezinye izinsimbi. ZemiBhalo le mikhiqizo anenombolo umxhwele izikhundla ayikwazi wathi mayelana nemikhiqizo ku wicholding.com.
Isayithi yangempela, ukubuyekezwa zazo ethulwa eliningi eyanele, iqukethe izingxenye eziningana.
Umkhiqizo kuphela, okuyinto ahlinzekwa njengengxenye umugqa yezimonyo, kuyinto ekuvuseleleni ukhilimu serum. Ukuze wenze lokhu kusho isayithi has a incazelo esikhulu, okungekho lidumisa "izakhiwo esiyingqayizivele" cream.
Njengengxenye Serum okukhulunywa: Amaprotheni ashintshwe alimondi, izimila zasolwandle akhiphe, uwoyela macadamia kanye sunflower, izangoma hazel akhiphe rose inflorescence. Ngaphezu kwalokho, kuthiwa ezinye izingxenye aqalwa alethwe Russia ikakhulukazi Wicholding. Ukubuyekeza, eqinisekisa izakhiwo imilingo ukhilimu whey, kunzima kakhulu ukuthola, ngakho izinga umkhiqizo kungabazeka kakhulu.
Ekhwalithi Ephezulu Limited
The main isithako umkhiqizo line ngegama elikhulu kangaka kuyinto amaranth.
Izinzuzo zalesi sitshalo wayaziwa ezinsukwini lwama-Aztec, futhi ukudla manje fast ne ukwengeza amaranth zingatholakala ku wicholding.com. Amazwana mayelana nenkampani kanye nesobho yayo esheshayo, iphalishi futhi kissels ukhuluma ngani amanani ulele.
Ngokusho nezethembiso abakhangisi, imikhiqizo amaranth kuthuthukisa umzimba, kusiza igazi nezinkinga pheshana emathunjini, ukususwa izinsalela futhi ukuqinisa amasosha omzimba. Lokhu kuphakamisa umbuzo wokuthi ngabe empeleni, isibonelo, utamatisi isobho nge inkukhu ukunambitheka izithako owamangalele. Ubani ihlola ikhwalithi mikhiqizo, ezingalotshwanga edayiswa ezitolo okudayisa?
Lezi zinhlobo ezimbili umkhiqizo ethulwa ngaphansi kwalesi sigaba:
1. Cereal WIC-ukuphila ikhiqizwa ne okuthandwa ezinhlanu: ukhilimu futhi amajikijolo, ibhotela, ukhilimu kanye strawberry, ibhotela, Barberry, raspberry nezinqulu kanye vanilla yemvelo ne bhotela. Zonke izithako kuphela odabuka yemvelo futhi bakhethwa ngokucophelela - ukuthi singazethemba izinto ezibhalwe incazelo ku wicholding.com. Uphenyo abalingani ekhona ukusekela ukunambitheka esiyingqayizivele futhi ukusetshenziswa okusanhlamvu, kodwa singazi batusa umbono wabo ukuthemba ngenxa isithakazelo somuntu siqu yokuthengisa.
2. Umkhiqizo ulwazi. Ukwandisa izinga yolwazi emkhakheni ezezimali Wicholding bamahhotela bakunikeza ukuthenga ezintathu amasethi DVD-ROM drive: "Loans", "Kubaluleka Investment" futhi "Ukuhlela Imali". Kumele kuqashelwe ukuthi le mininingwane ingatholakala litholakala ngokukhululekile kwi-Internet, umuntu nokubhala akubalwa ukuthenga lezi akwazi ukugcina. Kodwa labo abazi kanjani ukuyisebenzisa search engine ezivamile, kungasizi ngisho Wicholding. Amazwana mayelana nemikhiqizo Imininingwane kuphela ukufakazela ubuze babo kanye imfucuza ongenangqondo lemali.
Imikhiqizo Easy Life isigaba zihlukaniswe amaqembu amane:
"Ubuhle" - umugqa zakudala kanye zokuhlobisa.
"Ekhaya" - ezimbili izinhlobo nokunamathisela ukhilimu ukugeza, bleach kanye nethuluzi ukwahlukahlukana.
Tea Easy - izinhlobo eziyisikhombisa itiye, adalwe iresiphi ekhethekile.
"Impilo" - isobho Smoothies ukuthi ezinothe ngamavithamini kanye nezakhi.
abathengi abaningi ezingaba abakhalaza ngokuthi ukungabi khona kolwazi kwimikhiqizo wicholding.com. Amazwana mayelana nenkampani azizinhle kaningi, elibuye kubangela nokungathembani.
Umkhiqizo ngamunye incazelo eningiliziwe, ngilandisa izithako eliyingqayizivele futhi izakhiwo. Kulokhu, akunakwenzeka ukuba ngokushesha sibone ukubaluleka noma igama lezwe lapho mikhiqizo kukhiqizwa. Okuwukuphela kwendlela ukuze uthole ukwaziswa okuningiliziwe - kuyinto ukuxhumana abalingani yenkampani. Kulesi sigaba, iza ezithakazelisa kakhulu - ukucutshungulwa abathengi ezingaba, okuyinto sixoxa kabanzi.
Umgomo oyinhloko noma iyiphi inkampani inethiwekhi ukuheha abathengi abaningi, ngubani-ke bona babe ozakwethu. Ngakho-ke, wakha lonke umkhiqizo yokuthengisa inethiwekhi.
Ngakho, uma namanje bamazwe baya isethulo (mhlangano noma nje umhlangano), kubalulekile ukugcina ingqondo ecacile. Ingabe kube nzima ngempela, ngoba uyobe ukuxhumana ochwepheshe zangempela. Ngokuvamile abantu awuboni kanjani kulezi zimo zihlukaniswe Imininingwane sasivumela siqu nokuwa ngaphansi kwethonya.
isikimu okunjalo isetshenziswa Wicholding. Ukubuyekeza, ukukopela abalingani kanye nezikweletu - lawa izikhalazo main labantu washaya inethiwekhi. Ngokuvamile athembisa ukubhekana abahola okusezingeni eliphezulu, futhi phakathi izinzuzo umsebenzi, zizokwenziwa zibe yamemezela ngesikhatsi zombie, uqaphela okulandelayo:
Ngokuhlanganisa umsebenzi oyinhloko futhi kuthiya Wicholding;
amabhonasi ukuheha amakhasimende amasha;
ithuba ukuqala ibhizinisi ngaphandle utshalomali olwenziwe;
Amaholo omkhulu ngaphandle komzamo omkhulu.
Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi zonke lezi zithembiso akunangqondo ukukholelwa kuphela umuntu ukuzikhohlisa uzokwazi kubo. Nokho, abantu abaningi abafundile futhi ehlakaniphile bazithola izikweletu ngemuva ngokubambisana neNhlangano Wicholding.
Amazwana mayelana nenkampani
Thola ulwazi kuwebhu Wicholding impela nje, ukwenza ngcono, ngaphambi kokuba abe umlingani. Ngemva basayine isivumelwano esingokoqobo futhi owokuqala onikezwe kwe-muntu kulolu gibe.
zithinteka kakhulu ezifundeni - isizathu salokhu ukuthatheka ngokweqile futhi isifiso abavamile ukuphila kangcono. Ukuze utshalomali kwabasiza izinyanga eziningana kuyadingeka ukusebenza ngempumelelo - sorry, kodwa ukuthi ngemva kwalolu yesivumelwano nakuphathwa.
Uyoba athembisa ezintabeni egolide, kodwa ubunkimbinkimbi ukuthola imali yangempela nenkomba. Zonke imali abasebenzi inethiwekhi yenkampani akhiwa isikhwama esikhethekile electronic, kuyinto ukuhoxa lapho kungenzeka kuphela uma ukhokha ikhomishana. Ngaphezu kwalokho, wonke amanani nangama-euro, futhi isilinganiso sangaphakathi ikude Central Bank.
abalingani Owabe bathi ukuthi inhloko yawo ehhovisi akusho ananaze, futhi ngezinye izikhathi aphendukela ekusebenziseni izinsongo esisobala - lawa nje omunye zezizathu ezingenza Wicholding Izibuyekezo ezingezinhle.
Namuhla, bafuna kakhulu emva ochwepheshe emkhakheni wetisebenti - yokuthengisa abaphathi. Ukuze uphumelele kule ndawo, kumele ifa izimfanelo ezithile ukuze bakwazi ukuthola oxhumene nge labo abangase babe abathengi futhi ukukhomba izidingo zabo, bese ngobumnene ukunikela umkhiqizo wakho.
Umuntu abanamakhono ngempela angazuza kunethiwekhi ukumaketha imali ehloniphekile, kodwa sonke lesi umsebenzi kuzoletha ukukhungatheka izikweletu.
Ngaphezu kwalokho, i-choice inkampani igridi linendima ebalulekile. Brands nge nomlando omude ngemikhiqizo eliphezulu - kube nenxenye impumelelo, ikakhulukazi uma une ezakwehlela omuhle ne izimpahla ahlinzekwa.
Nokho, kukhona esinye isigaba izinkampani ukuphithizela kwenethiwekhi, isibonelo, Wicholding. Amazwana kanye nemibono abalingani wangaphambili kusikisela kumasikhuphulane lapho ukuphathwa akazizuzeli ku amaklayenti ezintsha, kanye nabasebenzi zabo. Ngo kuwebhu kukhona ngisho amasayithi ukuxhumana abalingani ukukhohliswa kabani le mindeni ezikweletini, futhi lapho Wicholding kuqhathaniswa ne ihlelo ezivamile.
Yiqiniso, ungakwazi ukuthola amanye amaphuzu umbono, isibonelo, abasebenzi okuthiwa yimpumelelo abangakwazi ukuthola ruble ezingaphezu kuka-100 eziyinkulungwane ngenyanga. Kodwa, njengoba sishilo, abantu banamakhono yokuthengisa kancane kungenakwenzeka ukuthi basuke ngokubhala izibuyekezo omuhle ngoba Wicholding.
Ngeshwa, akekho phakathi kwethu okuzivikela izimo ezinjalo. izinkampani angathembekile lizoqhubeka emakethe Russian. Ngakho-ke, pre-umsebenzi belulekwa ukuba elivunyelwa ukuhlola amakhono abo futhi ukhethe umqashi nge idumela elihle.
Marketing ukuxubana - kuba ... Umbono ukumaketha, mishini ukukhuthazwa